Traveller Chan - International
မစိမ်းလှသည့် မလေးရှားမှ လည်ပတ်စရာ နေရာများ
ဘန်ကောက်တွေ ဘာလီတွေ ခဏမေ့ထားလိုက်တော့။ အပြောင်းအလဲလေး ဖြစ်သွားအောင် သည်တစ်ခေါက် မလေးရှားဘက်ကို သွားကြည့်လိုက်ရအောင်။ မလေးရှားက နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက် လုံခြုံမှု ရှိရဲ့လား? ချမ်း တစ်ပတ်သာ လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံအရ မိမိရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ဂရုတစိုက် ထိန်းသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ အင်မတန် စိတ်ချရပါတယ်။
ပျားပန်းခတ်သမျှ များပြားလှတဲ့ လူအုပ်ထဲမှာ စီးမျှောရင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိထားမိတာကတော့ အများစုဟာ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်လေးတွေ။ သူတို့အချင်းချင်း ကိုးရီးယားလို နောက်ပြောင်ကျီစယ်နေကြသူတွေ ရှိသလို၊ တရုတ်လို ဟီဟီဟာဟာ နေကြသူတွေလည်း ရှိတယ်။ နှာသံလေးနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်း လေတွေဖောနေကြတဲ့ ယပလက်လေးတွေလည်း အများအပြားပဲ။
စားရိတ်သက်သက်သာသာနဲ့ ချင်းမိုင်ကို ဘော်ဒါတွေစုပြီး သွားလည်ကြမယ်
ချင်းမိုင်ရဲ့ Night life က အန္တရာယ်ကင်းပြီး ပျော်ဖို့ ကောင်းတယ်။ တောတောင်ရေမြေ အလှတရားတွေကို အပြည့်အဝ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားတယ်။ ခေတ်နှင့်အညီ လည်ပတ်စရာနေရာတွေ ဖန်တီးထားတယ်။ Adventures သမားတွေအတွက် Zipline မလား Rafting မလား? တည်းခိုစားသောက်စရိတ်ကို တွက်လိုက်ရင်လဲ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နင်လားငါလားပဲ။ သွားလာစရိတ် လောက်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံထက် အနည်းငယ်ပိုများမယ်။
နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် စွန့်စားပြီး ခရီးထွက်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဘန်ကောက်ကနေ စတင်လိုက်ပါ။
သဘာဝမိခင်၏ ရင်ငွေ့ဟု တင်စားနိုင်လောက်သော ဟလောင်းဘေး
ခရီးထွက်ချင်စိတ် ပေါ်လာတာနဲ့ ပြက္ခဒိန်ကြည့်လိုက်တော့ နိုင်ဝင်ဘာလမှာ ၃ရက်ဆက်တိုက်ပိတ်တဲ့ အပတ်က ၂ပတ်တောင် ရှိတယ်။